बुर्ज खालिफाको उचाईलाई चुनौती दिदैँ यहा बन्दैछ अग्लो भवन
एजेन्सी, १५ वैशाख । तपाईले बुर्ज खालिफाको नाम त सुन्नै भएको होला । यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन हो । यसको उचाई ८२९.८ मिटर रहेछ अर्थात् २ हजार ७२२ फिट ।
तर अब बुर्ज खलिफाको यो रेकर्ड चाँढै नै तोडिने भएको छ । साउदी अरबमा बुर्ज खालिफाको उचाईलाई चुनौति दिदैँ नयाँ भवन बनिरहेको छ । यसको उचाई ३ हजार २८१ फिट अर्थात् करिब एक किलोमिटर रहेको छ । यो भवनलाई ‘जेहाद टावर’ नाम दिइएको छ । यसअघि यसलाई किङडम टावर भनिन्थ्यो ।
यो भवन निर्माणको काम २०२२ सम्म सम्पन्न हुने योजना थियो तर अहिले यसको काम रोक्किएको छ । यस अलावा साउदीसँग जोडिएका अन्य रोचक तथ्यहरु पनि छन् जसबारे तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ ।
इस्लाम धर्ममा दुई ठाउँलाई मात्र पवित्र मानिन्छ । त्यो हो मक्का र मदिना यी दुवै ठाउँ साउदी अरबमा रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष लाखौं मुसलमानहरु यो ठाउँमा हजका लागि आउने गर्छन् । तर यो ठाउँमा गैर मुसलमानहरुलाई प्रवेशका लागि अनुमति छैन ।
तपाईलाई थाहा छ साउदीमा कुनै पनि संविधान छैन । यो मुलुक शहरिया कानुन अनुसार चल्छ । राजाले जे भन्छ त्यहीँ नै यहाँ सर्वमान्य हुन्छ । यहाँ एकदमै दर्दनाक तरिकाले तरवारले गर्दन काटेर अपराधीहरुलाई मृत्युको सजाय दिइन्छ ।
एक हजामले ९१ मानिसलाई कोरोना फैलाएपछि …
लकडाउन छल्दै धमाधम विवाह
क्वारेन्टाइन कमसल भएपछि चिल्लीमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन
भारतमा ६६ वर्षीय क्यान्सर बिरामी विजयी कोरोनालाई हराए
भारतमा १०० वर्षीया वृद्धाले जितिन कोरोनालाई
बेलायती महारानी बस्ने राजदरबारका रोचक तथ्य
बेल्जियममा वृद्धवृद्धामाथि कर लगाउन माग
कोमाबाट ब्युँझनासाथ पत्निको मृत्यूको खबर, ८ दिनपछि पतिको पनि मृत्यू
बाटोमै बच्चा जन्मेपछि १६० किलोमिटरको पैदल यात्रा …
तिब्बतको आकाशमा उड्न सक्दैनन् विमान, कारण छ यति भयानक
स्पेनमा एक ११३ वर्षकी वृद्धा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त
जिन्सको जिपमा लेखिएको यो तीन अक्षरको अर्थ थाहा छ तपाईलाई ?
एटीएममा विषालु सर्प घुसेपछि …
संकट चुलिएपछि ईश्वरको शरणमा ट्रम्प, भाइरस शान्ति पार्न ह्वाइट हाउसमा शान्ति पाठ
बुबाको गाडी चोरेर लम्बरगिनी गाडी किन्न हिँडेका पाँच वर्षका साहसी बालक
संसारको खुसी राष्ट्रमा विपन्न राष्ट्रको तुलनामा १३ गुणा बढी कोरोना
चिकित्सा क्षेत्रलाई नै चकित बनाएको फ्रोजन लेडीको यस्तो छ रहस्यमयी कथा
कोरोना सपना र बजेट दुःस्वप्न
प्रिय पाठक ! मेरो यो लेखको शीर्षक ठीक उल्टो छ । हुनुपर्ने ‘बजेट सपना र कोरोना दुःस्वप्न’ हो । कोरोना– यो ज्यानमारा भाइरस, त्यसले...